Sidee lagu xalin karaa Mashaqada ka taagan magaalada Baydhabo? – Bandhiga
Sidee lagu xalin karaa Mashaqada ka taagan magaalada Baydhabo?
Qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Koofur Galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxeey Magaalada Baydhabo ku kulmeyn ku simaha Madaxweynaha ahna Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo qaar kamid ah odiyasha dhaqanka.
Kulanka ayaa looga arrinsanayay xaaladda kacsanaanta ah iyo dibadbaxyada rabshada wata ee ka dhacaya Magaalada Baydhabo oo sii xoogeysanaya Marba marka ka dambeyso.
Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna ku simaha Madaxweynaha Koofur Galbeed ahna Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa Xildhibaanada ka dalbaday in si wadajir ah looga shaqeeyo dib u soo celinta Xasiloonidii Magaalada Baydhabo.
Kulankan oo ka dhacay Madaxtooyada Koofur Galbeed waxaa si gaar ah looga hadlayay suurta galnimada qabsoomidda Doorashada Madaxweynaha oo loo ballansan yahay Arbacada Todobaadkaan.
Xildhibaanada qaar ayaa sheegay in kulanka ay la qaateen sii hayaha Madaxweynaha Koofur Galbeed la soo jeediyay in Odoyaasha Dhaqanka loo adeegsado sidii ay u dajin lahaayeen shacabka dibadbaxa sameynaya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed ayaa ku sugan Xarunta Madaxtooyada oo la geeyay Ciidamo dheeraad ah, si ay ugu hortagaan Dibadbaxayaal marar badan isku day in ay gudaha u galaan.
Waana meesha uu ka bilawday isku soo baxa iyo shaqaada, kadib markii ay soo baxeen warar sheegayay in la xiray Mukhtaar Roobow oo kamid ahaa Tiro Musharaxiin ah oo looga yeeray Madaxtooyada Koofur Galbeed.
Ciidamada Booliiska ayaa shalay galab kala eryay dad isku soo baxay Bartamaha Magaalada Baydhabo, waxaana rabshada ka dhashay dibadbaxyada ay sababeen in Khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac, halka goobaha ganacsiga iyo waxbarashada ay xiran yihiin.